စာသငျခနျးတခနျးလုံးက ဝိုငျးဟားတာခံခဲ့ရတဲ့ လူဆိုးလေး -
စာသငျခနျးတခနျးလုံးက ဝိုငျးဟားတာခံခဲ့ရတဲ့ လူဆိုးလေး
တခါတုနျးက ကြောငျးဆရာမ တယောကျဟာ သူ့အတနျးထဲက ခပျဆိုးဆိုး ကြောငျးသားလေးတဦးကို ” သားကွီးလာရငျ ဘာလုပျမှာလဲ ” လို့ မေးလိုကျတဲ့ အခါ ကြောငျးသားလေးက မဆိုငျးမတှဘဲ ” ကနြျော ရုပျရှငျမငျးသားလုပျမယျ၊ ပွီးရငျ ဗိုကျဆာနတေဲ့ သူတှကေို မုနျ့လိုကျကြှေးမယျ ” လို့ ဖွလေိုကျတယျ။
အဲဒီလိုလညျး ဖွရေော အတနျးဖျောတှကေ ” ဒီကောငျ စောကျပေါ ” ဆိုပွီး သူ့ကို ဝိုငျးဟားကွတယျ ။ ဆရာမကလညျး ” မငျးလုပျခငျြတာတှကေ အရမျး စိတျကူးယဉျ ဆနျလှနျးတယျ၊ တခွားအရာတှကေို ပွောငျးစဉျးစားတာ ကောငျးလိမျ့မယျ” လို့ပွောခဲ့တယျ။
နောကျ နှဈပေါငျး၂၀ ကြျော ၃၀ ခနျ့ ကွာတဲ့အခါ အဲဒီ ကြောငျးသားလေးဟာ သူပွောခဲ့တဲ့ အတိုငျး ကမ်ဘာ့ ရုပျရှငျလောကရဲ့ ဝငျငှေ အမွငျ့မားဆုံး အခမျြးသာဆုံး မငျးသား၊ ၂၁ ရာစု ဥရောပနဲ့ အမရေိက က လူတှေ အားလုံးထကျ သွဇာရှိတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတယောကျ ဖွဈလာခဲ့တယျ ။
သူဟာ အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ အာဟာရခြို့တဲ့သူ ၄ သနျး ကြျောနဲ့ ကမ်ဘာ့ အိမျခွရောမဲ့တှေ အတှကျ သူရရှိတဲ့ အနုပညာကွေးငှေ ၇၅ % ကို လှူဒါနျးထား ပါတယျ ။ ဒါတှကွေောငျ့လညျး အဂျလနျဘုရငျမကွီး Elizabeth ကိုယျတိုငျက သူ့ကို ဂုဏျထူးဆောငျ ပရဟိတသမားဆု ပေးအပျခဲ့ ပါတယျ ။
ထိုသူကား အခွားမဟုတျ အခဈြ၊ အလှမျး၊ အဆှေး၊ အကွမျးအရမျး အကုနျ ရတဲ့ ကနြျောတို့ရဲ့ အသညျးကြျော Bollywood ဘုရငျကွီး shah rukh khan (ရှရှတျခမျး) ပငျ ဖွဈသညျ ။
တခွားလူတှေ မငျးအပျေါမွငျတဲ့ အမွငျက အရေးမကွီးပါဘူး ။ မငျးရညျမှနျးခကျြအပျေါ ထားတဲ့ မငျးရဲ့အမွငျ ကသာ အရေးအကွီးဆုံးပါ ။ သူတောငျးစားတှေ မှာလညျး ရှငျဘုရငျဖွဈခှငျ့ အိပျမကျ ရှိပါတယျ။ မဖွဈနိုငျဘူး ဆိုတာ တကယျ သခြောပွီလား ?
တခါတုန်းက ကျောင်းဆရာမ တယောက်ဟာ သူ့အတန်းထဲက ခပ်ဆိုးဆိုး ကျောင်းသားလေးတဦးကို ” သားကြီးလာရင် ဘာလုပ်မှာလဲ ” လို့ မေးလိုက်တဲ့ အခါ ကျောင်းသားလေးက မဆိုင်းမတွဘဲ ” ကျနော် ရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်မယ်၊ ပြီးရင် ဗိုက်ဆာနေတဲ့ သူတွေကို မုန့်လိုက်ကျွေးမယ် ” လို့ ဖြေလိုက်တယ်။
အဲဒီလိုလည်း ဖြေရော အတန်းဖော်တွေက ” ဒီကောင် စောက်ပေါ ” ဆိုပြီး သူ့ကို ဝိုင်းဟားကြတယ် ။ ဆရာမကလည်း ” မင်းလုပ်ချင်တာတွေက အရမ်း စိတ်ကူးယဉ် ဆန်လွန်းတယ်၊ တခြားအရာတွေကို ပြောင်းစဉ်းစားတာ ကောင်းလိမ့်မယ်” လို့ပြောခဲ့တယ်။
နောက် နှစ်ပေါင်း၂၀ ကျော် ၃၀ ခန့် ကြာတဲ့အခါ အဲဒီ ကျောင်းသားလေးဟာ သူပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း ကမ္ဘာ့ ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ဝင်ငွေ အမြင့်မားဆုံး အချမ်းသာဆုံး မင်းသား၊ ၂၁ ရာစု ဥရောပနဲ့ အမေရိက က လူတွေ အားလုံးထက် သြဇာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက် ဖြစ်လာခဲ့တယ် ။
သူဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အာဟာရချို့တဲ့သူ ၄ သန်း ကျော်နဲ့ ကမ္ဘာ့ အိမ်ခြေရာမဲ့တွေ အတွက် သူရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးငွေ ၇၅ % ကို လှူဒါန်းထား ပါတယ် ။ ဒါတွေကြောင့်လည်း အဂ်လန်ဘုရင်မကြီး Elizabeth ကိုယ်တိုင်က သူ့ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ပရဟိတသမားဆု ပေးအပ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ထိုသူကား အခြားမဟုတ် အချစ်၊ အလွမ်း၊ အဆွေး၊ အကြမ်းအရမ်း အကုန် ရတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ အသည်းကျော် Bollywood ဘုရင်ကြီး shah rukh khan (ရှရွတ်ခမ်း) ပင် ဖြစ်သည် ။
တခြားလူတွေ မင်းအပေါ်မြင်တဲ့ အမြင်က အရေးမကြီးပါဘူး ။ မင်းရည်မှန်းချက်အပေါ် ထားတဲ့ မင်းရဲ့အမြင် ကသာ အရေးအကြီးဆုံးပါ ။ သူတောင်းစားတွေ မှာလည်း ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခွင့် အိပ်မက် ရှိပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ တကယ် သေချာပြီလား ?
အမှနျတရားအတှကျ တိုကျပှဲဝငျနသေူတှအေတှကျ မိနျ့တျောမူလာတဲ့ မိုငျးဖုနျးဆရာတျောကွီး
ရုပ်ရှင်ရုံတွေဖွင့်ပီး အကယ်ဒမီပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် အားပေးတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့ အကယ်ဒမီရန်အောင်(ရုပ်သံ)